गोपनीयता नीति - तत्व सोसायटी
तपाईंको गोपनीयताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ। तपाईंको व्यक्तिगत डेटाको प्रयोगको सम्बन्धमा तपाईसँग कुनै प्रश्न वा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी खुशीसाथ तपाईंलाई सहयोग गर्नेछौं।
यस साइट वा / र हाम्रो सेवाहरू प्रयोग गरेर, तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंगमा सहमत हुनुहुन्छ जुन यस गोपनीयता नीतिमा वर्णन गरिएको छ।
यस नीतिमा परिभाषाहरू प्रयोग गरियो
डेटा संरक्षण सिद्धान्तहरू हामीले पछ्याउँदछौँ
तपाईंको व्यक्तिगत डेटाको सन्दर्भमा तपाइँसँग के अधिकारहरू छन्
हामीले तपाईंको बारेमा सङ्कलन गर्ने व्यक्तिगत डेटा
हामी तपाईंको व्यक्तिगत डेटा कसरी प्रयोग गर्छौं
तपाईको व्यक्तिगत डेटा को लागी कोहि को लागी छ
कुकीजहरूको बारेमा जानकारी
व्यक्तिगत डेटा - पहिचान वा पहिचान योग्य प्राकृतिक व्यक्तिसँग सम्बन्धित कुनै पनि जानकारी।
प्रशोधन - कुनै पनि अपरेसन वा अपरेसनको सेट जुन व्यक्तिगत डेटामा वा व्यक्तिगत डेटाको सेटमा गरिन्छ।
डेटा विषय - एक प्राकृतिक व्यक्ति जसको व्यक्तिगत डेटा प्रशोधन भइरहेको छ।
बाल - 16 वर्ष उमेर अन्तर्गत एक प्राकृतिक व्यक्ति।
हामी / हामीलाई (या तो पूंजीकृत या नहीं) -
डेटा संरक्षण सिद्धान्तहरू
हामी निम्न डेटा सुरक्षा सिद्धान्तहरू पछ्याउने प्रतिज्ञा गर्छौं:
प्रसोधन वैध, निष्पक्ष, पारदर्शी हो। हाम्रो प्रोसेसिंग गतिविधिहरु लाई कानूनी आधार छ। व्यक्तिगत डाटा प्रसोधन गर्नु अघि हामी सधै तपाईंको अधिकारलाई विचार गर्दछौं। हामी तपाईंलाई अनुरोधमा प्रशोधन सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्नेछौं।
प्रशोधन उद्देश्यमा सीमित छ। हाम्रो प्रोसेसिंग गतिविधिहरू व्यक्तिगत डेटा एकत्रित भएको उद्देश्य उद्देश्य।
कम से कम डेटा संग प्रशोधन गरिन्छ। हामी केवल इकट्ठा गर्दछ र कुनै पनि उद्देश्य को लागि आवश्यक व्यक्तिगत डेटा को न्यूनतम राशि को संसाधित गर्नुहोस।
प्रशोधन एक समय अवधि संग सीमित छ। हामी तपाईको व्यक्तिगत डेटा आवश्यक भन्दा लामोको लागि भण्डार गर्नुहुन्न।
डेटाको शुद्धता सुनिश्चित गर्न हामी सबै भन्दा राम्रो गर्नेछौं।
हामी डेटाको सत्यता र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न हाम्रो सबै भन्दा राम्रो काम गर्नेछौं।
डेटा विषयको अधिकार
डेटा विषयमा निम्न अधिकारहरू छन्:
जानकारीको अधिकार - यसको अर्थ छ तपाइँलाई थाहा छ कि तपाईंको व्यक्तिगत डेटा प्रशोधन गरिएको छ कि; कुन डेटा इकट्ठा गरिन्छ, कहाँ प्राप्त गरियो र किन र किन र यो प्रक्रियामा छ।
पहुँचको लागि अधिकार - यसको अर्थ तपाईंसँग / बाट सम्बन्धित डेटा पहुँच गर्न अधिकार छ। यसमा तपाइँको अनुरोध गर्न र तपाईंको व्यक्तिगत डेटा एक प्रतिलिपि एक प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने अधिकार समावेश गर्दछ।
पुनः संशोधनको अधिकार - तपाईंसँग तपाईंको व्यक्तिगत डेटा को पुनःिकरण वा मेटाउने अनुरोध गर्ने अधिकार छ जुन गलत वा अपूर्ण छ।
मेटाउन को लागी अधिकार - केहि निश्चित परिस्थितिहरुमा अर्थ तपाईले तपाइँको व्यक्तिगत डेटा हाम्रो रेकर्डबाट मेटिने अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रशोधन रोक्नको अधिकार - अर्थ जहाँ निश्चित अवस्थाहरू लागू हुन्छ, तपाइँसँग तपाइँको व्यक्तिगत डेटाको प्रसोधनलाई रोक्न अधिकार छ।
प्रोसेसिंगमा वस्तुको लागि सही - अर्थ केहि निश्चित अवस्थामा तपाइँसँग तपाईंको व्यक्तिगत डेटा प्रसोधन गर्न वस्तुको अधिकार हो, उदाहरणको लागि सीधा मार्केटिंगको मामिलामा।
स्वचालित प्रोसेसिंगमा वस्तुको लागि अधिकार - अर्थसँग तपाईंको स्वचालित प्रोसेसिंगमा वस्तुको अधिकार छ, प्रोफाइल सहित; र स्वचालित रूपमा प्रशोधनमा आधारित एक निर्णयको अधीनमा रहन। यो सही बेला तपाईले व्यायाम गर्न को लागी कानूनी प्रभाव उत्पन्न गर्नुपर्दछ वा महत्त्वपूर्ण रूपमा तपाइँलाई असर गर्ने बेलामा व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ।
डेटा पोर्टेबिलिटीको अधिकार - तपाईसँग तपाइँको व्यक्तिगत डेटा प्राप्त गर्न मिल्ने-पढ्न योग्य ढाँचामा वा यो सम्भव छ, एक प्रोसेसरबाट अर्को सीधा हस्तांतरणको रूपमा।
एक शिकायत छान्ने अधिकार - घटनामा हामी पहुँचको पहुँचको तहत तपाईंको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दछौं, हामी किन कारणको कारण प्रदान गर्नेछौं। यदि तपाईं आफ्नो अनुरोध निलम्बित तरिकासँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
यसका लागि सही पर्यवेक्षक अधिकारी - मतलब तपाईं सँग एक पर्यवेक्षी प्राधिकारी र अन्य कानुनी उपचारहरूको लागि अधिकार जस्तै दावी गर्ने अधिकारको लागि अधिकार छ।
सहमति फिर्ता लिने अधिकार - तपाईसँग दाँया तपाइँको व्यक्तिगत डेटा प्रसोधनको लागि कुनै पनि सहमतिलाई हटाउनुहोस्।
तपाईंले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको जानकारी
यो तपाईंको ई-मेल ठेगाना, नाम, बिलिङ ठेगाना, गृह ठेगाना आदि हुन सक्दछ - मुख्य रूपमा तपाइँलाई एक उत्पादन / सेवा प्रदान गर्न आवश्यक छ वा हामीसँग हाम्रो ग्राहक अनुभव बढाउन आवश्यक छ। हामी तपाईंलाई जानकारी प्रदान गर्नका लागि जानकारी सुरक्षित गर्छौं ताकि तपाइँलाई टिप्पणी गर्न वा वेबसाइटमा अन्य गतिविधिहरू प्रदर्शन गर्नका लागि। यो जानकारी समावेशका लागि, उदाहरणको लागि, तपाईंको नाम र इ-मेल ठेगाना।
स्वचालित रूपमा तपाईंको बारेमा जानकारी एकत्रित
यसमा जानकारीहरू जुन स्वचालित रूपमा कुकीहरू र अन्य सत्र उपकरणहरू द्वारा भण्डार गरिएको छ। उदाहरणका लागि, तपाईंको खरीदारी कार्ट जानकारी, तपाईंको IP ठेगाना, तपाईंको किनमेल इतिहास (यदि कुनै हो भने आदि। यो जानकारी तपाईंको ग्राहक अनुभव सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ। जब तपाइँ हाम्रा सेवाहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ वा हाम्रो वेबसाइटको विषयवस्तुहरू हेर्नुहुन्छ, तपाइँका गतिविधिहरू लगिन सक्दछ।
हाम्रा साझेदारहरूको जानकारी
हामी हाम्रो विश्वसनीय साझेदारहरूको बारेमा जानकारी इकट्ठा गर्छौं कि उनीसँग यो जानकारी साझेदारी गर्न कानूनी आधारहरू छन्। यो या त जानकारी हो जुन तपाईले तिनीहरूलाई सिधै प्रदान गर्नुभएको छ वा तिनीहरू अन्य कानूनी आधारमा तपाईंको बारेमा एकत्रित गरेका छन्। यो सूची हो: एनसीएस ट्रस्ट, ईएफएल ट्रस्ट।
सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध जानकारी
हामी सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ कि बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्न सक्छौं।
हामी तपाईंको व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्नका लागि प्रयोग गर्दछौं:
तपाइँलाई हाम्रो सेवा प्रदान गर्नुहोस्। यसमा समावेश छ, उदाहरणका लागि, तपाइँको खाता दर्ता गर्दै; तपाईंले अनुरोध गर्नुभएको अन्य उत्पादन र सेवाहरू प्रदान गर्दै; तपाईंको अनुरोधमा प्रोमोशनल वस्तुहरू प्रदान गर्दै र ती उत्पादनहरू र सेवाहरूको सम्बन्धमा तपाईंसँग कुराकानी गर्दै; संवाद र तपाईंसँग अन्तरक्रिया; र तपाईंलाई कुनै पनि सेवाहरूमा परिवर्तनहरूको सूचित गर्दै।
तपाईंको ग्राहक अनुभव बढाउनुहोस्;
कानुन वा अनुबंधको लागी एक दायित्व पूरा गर्नुहोस्;
तपाईं वा तपाईंको बच्चासँग दर्ता गरिएको युवा कार्यक्रमको बारेमा संवाद गर्न;
हाम्रो युवा कार्यक्रमहरूको सफलताको बारेमा कथाहरू;
युवा वा कार्यक्रममा तपाइँ वा तपाईंको बच्चालाई समर्थन गर्न
हामी तपाईंको व्यक्तिगत डेटा वैध आधारमा र / वा तपाईंको सहमतिको साथ प्रयोग गर्दछौं।
अनुबंधमा प्रवेश गर्न वा अनुबंधिक दायित्वहरू पूरा गर्ने आधारमा, हामी निम्न उद्देश्यका लागि तपाईंको व्यक्तिगत डेटा प्रसोधन गर्दछौं:
तपाईंलाई पहिचान गर्न;
तपाइँलाई एक सेवा प्रदान गर्न वा पठाउन / तपाईंलाई एक उत्पादन प्रदान गर्न;
बिक्री वा चलानीको लागि संवाद गर्न;
वैध ब्याजको आधारमा, हामी तपाईंको व्यक्तिगत डेटा निम्न उद्देश्यका लागि प्रक्रिया गर्दछौं:
तपाइँलाई व्यक्तिगतकृत प्रस्तावहरू पठाउन * (हामीलाई र / वा हाम्रो सावधानीपूर्वक चयनित साझेदारहरूबाट);
प्रस्तावित / उपलब्ध गराउने उत्पादन / सेवाको गुण, गुणस्तर, र उपलब्धता सुधार गर्न हाम्रो ग्राहक आधार (खरिद व्यवहार र इतिहास) व्यवस्थापन र विश्लेषण गर्न;
जब सम्म तपाईं हामीलाई सूचित छैन अन्यथा, हामी तपाईंलाई वैध रुचि हुनको लागी तपाईंको खरिद ईतिहास / ब्राउजिङ व्यवहारमा समान हो।
तपाईंको सहमतिको साथ हामी तपाईको व्यक्तिगत डेटा निम्न उद्देश्यका लागि प्रक्रिया गर्दछौं:
तपाइँ न्यूजलेटरहरू र अभियान प्रस्तावहरू पठाउनुहुन्छ (हामीलाई र / वा हाम्रो सावधानीपूर्वक चयनित साझेदारहरूबाट);
अन्य उद्देश्यका लागि हामीले तपाईंको सहमतिको लागि सोध्नु भएको छ;
हामी तपाईंको व्यक्तिगत डेटा प्रसोधन गर्नको लागी दायित्व पूरा गर्न कानून र / वा तपाईंको व्यक्तिगत डेटालाई कानून द्वारा प्रदान गरिएको विकल्पहरूको प्रयोग गर्न को लागी। हामी व्यक्तिगत डेटा एकत्रित र कुनै पनि यस्तो डाटा प्रयोग गर्न गुमनामी अधिकारको आरक्षित गर्छौं। हामी यो नीतिको दायरा बाहिर डाटा मात्र प्रयोग गर्नेछौं जब यो गुमनाम गरिएको छ। हामी बिलिंग जानकारी जस्ता क्रेडिट कार्ड विवरणहरू सुरक्षित गर्दैनौं। हामी खाताको उद्देश्यबाट वा अन्य नियमहरू कानूनबाट व्युत्पन्नका लागि आवश्यक लामो समयसम्मको लागि एकत्रित अन्य खरिद जानकारी बचत गर्नेछौं, तर5वर्ष भन्दा लामो छैन।
हामी तपाईंको व्यक्तिगत डेटालाई थप उद्देश्यहरूको लागि यहाँ उल्लेख नगरिकन प्रशोधन गर्न सक्दछ, तर मूल उद्देश्यसँग मिल्दो छ जुन डाटा सङ्कलन गरियो। यसो गर्न, हामी यो सुनिश्चित गर्नेछौं:
व्यक्तिगत डेटाको उद्देश्य, सन्दर्भ र प्रकृति बीच लिङ्क थप प्रसोधनको लागि उपयुक्त छ;
थप प्रशोधनले तपाईंको चासोलाई क्षति पुर्याउँदैन र
त्यहाँ प्रशोधनको लागि उपयुक्त सुरक्षा हुनेछ।
हामी तपाईंलाई कुनै पनि प्रसोधन र उद्देश्यको सूचित गर्नेछौं।
अरू तपाईंको व्यक्तिगत डेटा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ
हामी तपाईंको व्यक्तिगत डेटा अजनबियों संग साझा गर्दैनौं। तपाईंको बारे मा व्यक्तिगत डेटा हाम्रो विश्वसनीय साझेदारहरुलाई प्रदान को केहि मामलाहरुमा छ ताकि तपाईं लाई सेवा प्रदान गर्न वा तपाईंको ग्राहक अनुभव को बढावा दिन को लागि। हामी तपाईंको डेटा को साथ साझा गर्छौं:
हाम्रो प्रसोधन साझेदार:
भुक्तानीका लागि पेपाल। तपाईंलाई यो प्रक्रियाको रूपमा सूचित गरिएको छ।
हाम्रो कार्यक्रम साझेदारहरू:
NCS कार्यक्रमहरूको लागि NCS ट्रस्ट मात्र।
EFL ट्रस्ट - केवल NCS कार्यक्रमहरूको लागि।
हामी केवल प्रोसेजिङ साझेदारहरूसँग काम गर्दछौं जसले तपाईंको व्यक्तिगत डेटामा पर्याप्त स्तरको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दछ। हामीले तपाईंको व्यक्तिगत डेटा तेस्रो पक्ष वा सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई खुला गर्दछौं जब हामी कानूनी रूपमा यो गर्न बाध्य छौं। यदि तपाइँसँग यो सहमति भएको छ भने हामी तपाइँको व्यक्तिगत डेटा तेस्रो पक्षमा प्रकट गर्न सक्छौं वा यसको लागि अन्य कानूनी आधारहरू छन्।
हामी आफ्नो व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित राख्न को लागि हाम्रो सबै भन्दा राम्रो गर्छौं। हामी संचार र डेटा स्थानांतरित गर्नका लागि सुरक्षित प्रोटोकॉलहरू प्रयोग गर्दछौं (जस्तै HTTPS)। हामी गुमनाम बनाउने र छद्मनाम प्रयोग गर्दछौं जहाँ उपयुक्त। हामी सम्भावित हानिकारकहरू र आक्रमणहरूको लागि हाम्रो प्रणालीलाई निगरानी गर्दछौं।
यद्यपि हामी आफ्नो सर्वोत्तम प्रयास गरौं भने हामी जानकारीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौ। तथापि, हामी डेटा भ्वाइसहरूको उपयुक्त अधिकारहरूलाई सूचित गर्ने प्रतिज्ञा गर्छौं। तपाईंको अधिकार वा चासोको लागि खतरा भने हामी सूचित गर्नेछौं। हामी सशस्त्र सुरक्षा सुरक्षाहरू रोक्न सक्ने सबै चीजहरू गर्नेछौं र अधिकारीहरूलाई कुनै भ्वाइस पर्दछ।
यदि तपाईंसँग हाम्रो खाता छ भने, ध्यान दिनुहोस् कि तपाईंले आफ्नो प्रयोगकर्तानाम र पासवर्ड गोप्य राख्नु पर्छ।
हामी इकट्ठा गर्न वा जान्दछौं कि हामीले 14 उमेर भन्दा कम उमेरको बच्चाहरु लाई जानकारी बाट एकत्रित गर्नु हाम्रो वेबसाइट मार्फत। एक युवा दानको रूपमा, त्यहाँ जवान व्यक्तिहरूको रुचि राख्ने वा हाम्रो कार्यक्रममा भाग लिने सम्बन्धी जानकारी एकत्र गर्न आवश्यक छ। अभिभावक डेटा उपलब्ध गराउँदा आमाबाबु यस डेटाको बारेमा सम्पर्क गरिएको छ।
कुकीहरू र अन्य प्रविधिहरू हामी प्रयोग गर्दछौँ
ग्राहक कुकीहरू विश्लेषण गर्न, वेबसाइट प्रबन्ध गर्न, प्रयोगकर्ताहरूको आचरणहरू ट्रयाक गर्न र प्रयोगकर्ताहरूको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्न कुकीहरू र / वा समान प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछौं। यो तपाईंको व्यक्तिगत अनुभव र हाम्रो साथ अनुभव बढाउनको लागि गरिन्छ।
कुकी तपाईंको कम्प्युटरमा भण्डार गरिएको सानो पाठ फाइल हो। कुकीजहरू साइटहरू काम गर्न मद्दतको लागि प्रयोग गरिने भण्डार जानकारी भण्डारण गर्दछ। केवल हामी मात्र हाम्रो वेबसाइट द्वारा बनाईएको कुकीजहरू पहुँच गर्न सक्दछौं। तपाइँ ब्राउजर तहमा तपाइँका कुकीजहरू नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। कुकीहरू असक्षम गर्न छनौटले केही कार्यहरूको प्रयोगलाई रोक्न सक्छ।
हामी निम्न उद्देश्यहरूको लागि कुकीजहरू प्रयोग गर्दछौं:
आवश्यक कूकीहरू - यी कुकिजहरू तपाईंलाई हाम्रो लगइनमा केही महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुन आवश्यक छ जस्तै, लगइन इन। यी कुकीजहरू कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन गर्दैनन्।
प्रकार्यता कुकीज - यी कुकीजले कार्यक्षमता प्रदान गर्दछ जसले हाम्रो सेवालाई अझ सजिलो बनाउदछ र अधिक व्यक्तिगत सुविधाहरू प्रदान गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, उनीहरूले तपाइँको नाम सम्झन सक्छ र टिप्पणी फारमहरूमा ई - मेल पठाउन सक्दछ ताकि तपाईले यो सूचना पुन: प्रविष्ट गर्न अर्को पटक टिप्पणी गर्दा।
एनालिटिक्स कुकीजहरू - यी कुकिजहरू हाम्रो वेबसाइट र सेवाहरूको प्रयोग र प्रदर्शनको ट्रयाक गर्न प्रयोग गरिन्छ
विज्ञापन कुकीजहरू - यी कुकीजहरू तपाइँलाई र तपाईंको चासोमा विज्ञापनहरू प्रदान गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसको अतिरिक्त, तिनीहरू एक विज्ञापन देख्दा संख्या सीमित गर्न प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू सामान्यतया वेबसाइट अपरेटरको अनुमतिको साथ विज्ञापन सञ्जालद्वारा वेबसाइटमा राखिन्छन्। यी कुकीजहरू सम्झन्छन् कि तपाईंले वेबसाइट भ्रमण गर्नुभएको छ र यो जानकारी अन्य संस्थाहरू जस्तै विज्ञापनदाताहरूसँग साझेदारी गरिएको छ। प्राय: लक्ष्यीकरण वा विज्ञापन कुकीज अन्य संगठन द्वारा उपलब्ध गराईएको साइट प्रकार्यता संग जोडिएको छ।
तपाइँ आफ्नो ब्राउजर सेटिंग्स मार्फत तपाइँको कम्प्यूटरमा कुकीज भण्डारण हटाउन सक्नुहुन्छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं एक 3rd पार्टी कुकीजलाई गोपनीयता वृद्धि मंच प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ optout.aboutads.info or youronlinechoices.com। कुकीजहरूको बारेमा थप जानकारीको लागि, जानुहोस् allaboutcookies.org.
हामी हाम्रो वेबसाइटमा ट्राफिक मापन गर्न Google Analytics प्रयोग गर्छौं। Google सँग उनीहरूको आफ्नै गोपनीयता नीति छ जुन तपाईंले समीक्षा गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ। यदि तपाइँ Google Analytics द्वारा ट्रयाकिंग अप्ट आउट गर्न चाहनुहुन्छ भने, जानुहोस् Google Analytics अप्ट आउट पृष्ठ.
इङ्गल्याण्डमा डेटाको लागि पर्यवेक्षक प्राधिकरण - https://ico.org.uk - आईसीओ - सूचना परिचार कार्यालय
तत्व समाज - डेटा चर्चा गर्न 0114 2999 214 लाई कल गर्नुहोस्।
हामी यस गोपनीयता नीतिमा परिवर्तन गर्न अधिकार सुरक्षित छौं।
अन्तिम संशोधन गरिएको थियो 21 / 05 / 2018।